एन्टिबायोटिकको प्रयोग : कस्तो सावधानी अपनाउने?
कात्तिक ३०, २०७४ बिहिवार १७:२२:००
एन्टिबायोटिक (प्रतिजैविकी) भन्नेबित्तिकै सामान्यतया संक्रमण निर्मूल गर्न दिइने औषधि भन्ने बुझिन्छ। साधारणतया यो शब्द ब्याक्टेरियाको विरुद्ध काम गर्ने औषधिका निम्ति प्रयोग गरिन्छ। एन्टिबायोटिक अन्तर्गत धेरै समूह वा वर्गका औषधि पर्छन्, जसले विभिन्न थरीका ब्याक्टेरिया...
कात्तिक २९, २०७४ बुधवार २१:१५:००
पहिले-पहिले मोटाउनुलाई निकै गर्वको विषय मानिन्थ्यो। अहिले मोटाउनु मानिसका लागि अभिसाप बन्न थालेको छ। निरन्तर मोटाउँदै जाँदा शरीरमा विभिन्न रोग लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ। मोटोपना भनेको शरीरको तौल बढ्ने हो। नेपालीमा मोटोपना विशेष गरेर शरीरभरि भन्दा पनि पेटमा बढेको...
कात्तिक २९, २०७४ बुधवार १३:४४:००
'क्रोन्स' पाचन प्रणालीमा लाग्ने रोग हो। सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुखदेखि सानो आन्द्रा, ठूलो आन्द्रा हुँदै मलद्वारसम्म साना साना घाउ हुने समस्यालाई क्रोन्स भनिन्छ। यस्ता घाउ ती अंगमा जहाँ पनि हुन सक्छ। यो समस्या विशेषगरी सानो आन्द्राको पछिल्लो भाग र ठूलो आन्द्राको अघिल्ल...
जाडोमा बढी हुने रक्तनसाको रोग 'रेनोद्स': लक्षण र उपचार
कात्तिक २९, २०७४ बुधवार १२:४४:००
आम जनमानसमा रेनोद्स रोगबारे धेरै कमैलाई थाहा होला। तर, यो रोगले धेरैलाई सताइरहेको हुन्छ। धेरैले यो रोगलाई औंला कालो हुने रोग, चिसोले खाएको आदि नामले बुझे पनि यो रोगको मेडिकल नाम भने 'रेनोद्स रोग' हो। यो रोगमा हात-खुट्टाका औंलामा जाने स-सान...
कात्तिक २८, २०७४ बुधवार ००:३२:००
मधुमेहले शरीरका विभिन्न अंगमा असर गर्छ। मधुमेहले आँखा, मुटु, मस्तिष्क, मिर्गौला, स्नायु जस्ता अंगमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ। यहाँ हामी मधुमेहले दृष्टिमा पार्ने असरबारे चर्चा गर्नेछौं। मधुमेहले मानिसको देख्न सक्ने शक्तिलाई बिस्तारै क्षीण बनाइदिन्छ र अन्त्यमा ‘डाइबेटिक...
कात्तिक २८, २०७४ मगलवार १२:४४:००
मधुमेह रोगीको संख्या बढ्दो छ। यस्तै अवस्था रहे यसले विकराल रुप लिने तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। बुढ्यौलीपन, मानसिक तनाब, खानपिनमा लापरवाही आदि मधुमेह बढ्ने मुख्य कारक तत्व हुन्। सन् २०१४ मा विश्वभरि मधुमेहका बिरामीको संख्या ३८ करोड २० लाख हाराहारीमा थियो। सन् २०३० मा य...
के हो हिउँदे झाडापखाला, कसरी जोगाउने बालबालिका?
कात्तिक २७, २०७४ मगलवार ०२:४४:००
धेरैलाई गर्मी र वर्षातमा 'डाइरिया' अर्थात् झाडापखाला लाग्छ भन्ने थाहा छ। त्यसैले यसबाट बच्ने पूर्व उपायहरु अपनाउन वर्षात लागेसँगै विभिन्न मध्यमबाट व्यापक प्रचार गर्ने गरिन्छ। तर, धेरैलाई जाडो महिनामा पनि झाडापखाला लाग्छ भनेर थाहा भएको पाइँदैन। जाडो महिनामा ख...
कात्तिक २७, २०७४ सोमवार १४:४४:००
महिनावारी हुनुअघिका बालिकाको ‘प्राइभेट अंग’ कसरी सफा गर्ने ? किन छ जरुरी? [भिडियो]
कात्तिक २७, २०७४ सोमवार १२:४४:००
सरसफाइ सबैका लागि आवश्यक छ। हाम्रो वरपरको वातावरण, खानपानका साथै शारिरीक सरसफाइ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। धेरैले नुहाउनुलाई मात्र सरसफाइ भन्छन्। तर, बाहिरी सफाइसँगै यौनांगको सफाइबारे धेरैले चासो राख्नैनन्। बालिकादेखि वृद्ध महिलासम्मले यौनांग सफाइ गर्न...
सुन्दर अनुहार तथा अाकर्षक शरीर बनाउन गरिने कस्मेटिक सर्जरी के हो ?
कात्तिक २६, २०७४ सोमवार ०३:४४:००
कस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरीकै एउटा अंग हो । कस्मेटिक सर्जरीलाई सुन्दरता निखार्ने प्रक्रियाका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । विशेषगरी अनुहारमा नमिलेको भाग र चाउरी परेको छालालाई तन्काउनेदेखि लिएर सुन्दर अनुहार तथा शरीरका लागि कस्मेटिक सर्जरी गर्न सकिन्छ । शरीरको बाहिरी अंगम...
के हो कस्मेटिक सर्जरी ? के केको गर्न सकिन्छ ?
कात्तिक २६, २०७४ आइतवार १४:१४:००
बालबालिकामा बढ्दै गएको अदूरदृष्टि समस्या के हो? (कारण र लक्षण)
कात्तिक २६, २०७४ आइतवार ११:४४:००
हालै प्रकाशित तथ्यांक अनुसार विश्वमा परावर्तनीय दोष हुने मान्छेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। तीमध्ये अधिकांशमा अदूरदृष्टि (म्योपिया) छ। अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरुले गरेको आँकलन अनुसार सन् २०५० सम्ममा विश्वका ५० प्रतिशत मानिसमा अदूरदृष्टि हुने सम्भावना छ। बढी मात्रा...
कात्तिक २५, २०७४ शनिवार २२:३२:३०
एक दिन काम विशेषले शहर नजिकैको एउटा गाउँ गएको थिएँ । चिया पसलमा चिया पिउन एकैछिन के रोकिएको थिएँ । त्यहाँ मैले २०–२२ वर्ष जस्ती देखिने एक गर्भवती महिलालाई देखें । गर्भवती महिला बाटोमा भेटिनु खासै नौलो कुरा होइन । तर उनको अनुहारमा नीलडाम देखिनु भनेको अ...
छारेरोगका लक्षण, गर्न हुने र नहुने काम
कात्तिक २४, २०७४ शुक्रवार १५:२८:००
छारेरोग एक किसिमको मस्तिष्क रोग हो । यस रोगले मानिसको मस्तिष्कमा असामान्य रुपले विद्युत तरंग उत्पन्न गर्छ । जसले गर्दा बिरामी मुर्छा पर्ने, आखाँ पल्टाउने, मुखबाट फिँज निकाल्ने, हातखुट्टा झट्काउने र एकाएक आफै ब्युँझने गर्छन् । यो रोग अरु रोगजस्तै शरीरभित्रको खराबीका कारणल...
बालबालिकामा किन बढ्दै छ अदूरदृष्टि? यस्ता छन् कारण र लक्षण
कात्तिक २३, २०७४ बिहिवार २०:०५:००
बारम्बार ढोकामा ताल्चा लगाउन बिर्सें जस्तो लाग्छ ? ओसीडी पो भयो कि !
कात्तिक २१, २०७४ मगलवार १४:३७:४२
कुनैपनि सोचाई दिमागमा बारबार आइराख्ने अर्थात् त्यही कारणले गर्दा एउटै काम धेरै पटक गर्ने कसैको बानी छ भने अप्सेस्सिभ कम्पलसिभ डिस्अर्डर (ओसीडी) हुन सक्छ । यो समस्या बारम्बार आइराख्ने सोचाईले मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन भएपछि चाल पाउन सकिन्छ । जस्तै, घरको ढोकामा ताल्चा लगाए...
ढाड नहुने, टाउको ठूलो हुने जस्ता गम्भिर समस्याका साथ बच्चा जन्मने एउटा यस्तो कारण
कात्तिक १९, २०७४ आइतवार १३:१४:००
बच्चा जन्मदा टाउको निकै ठूलो हुने, कसैको टाउको नहुने, ढाडमा पानीले भरिएका पोका हुने, ढाड नहुने, कसैको पुच्छरजस्तो थप अंग निस्कने जस्ता समस्या देखिने गर्छन्। नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा यस्ता समस्या सहित जन्मिएका बच्चा भेटिने गरेका छन्। नेपालमा जन्तजात यस्ता समस्या ल...
कात्तिक १८, २०७४ शनिवार १२:४४:००
हिजोआज धेरै मानिस युएसजी (भिडियो एक्सरे) गर्दा फ्याटी लिभर (कलेजोमा बोसो) देखियो भनेर अस्पताल आउने गरेको पाइन्छ। के हो त फ्याटी लिभर? सामान्य बुझाइका लागि फ्याटी लिभर भनेको कलेजोमा बोसो जमेको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ। के यो सामान्य हो या क...
बच्चाको आँखा ठिक छ छैन, कसरी थाहा पाउने?
कात्तिक १५, २०७४ बुधवार १३:४४:००
आँखा संवेदनशील अंग हो। ठूला व्यक्तिहरुमा मात्र होइन बालबालिकामा पनि आँखामा विभिन्न समस्या देखिइरहेका हुन्छन्। सबै बालबालिकाले आफूमा भएको समस्या भन्न सक्दैनन्। आफ्ना बच्चाको आँखा ठिक छ कि छैन भनेर अभिभावकले ध्यान दिनु आवश्यक छ। खासगरी बच्चा जन्मेपछि दुई-तीन ...
बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया : लक्षण र उपचार
कात्तिक १४, २०७४ मगलवार २२:३३:००
प्रोस्टेट पुरुषमा हुने ग्रन्थि हो । यो पिसाब नलीकै एउटा क्षेत्र हो । यो ग्रन्थि पिसाब थैलीबाट लिंगसम्म पुग्ने पिसाबनलीको एक भागमा पर्छ । प्रोस्टेटले वीर्य निस्कासन गर्ने बेला वीर्यलाई लिंगसम्म पुर्याबउने, वीर्यलाई पोषण गराउने आदि काम गर्छ । प्रोस्टेटको तौल सामान्यतया १८ देखि ...